Umaki: magento »Ikhasi 6 kwangu-8» Martech Zone
Hlanganisa: I-oda elihlangene nokuphathwa kwempahla
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 25, i-2014 NgeSonto, uDisemba 24, i-2017 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ama-Stitch Labs anikela ngokulawulwa okuhlangene nokuphathwa kwempahla kuziteshi ze-e-commerce. Gwema ukufaka amanani ezimpahla ngesandla kumaspredishithi, ukuthola ama-invoyisi, noma ukubheka imininingwane yokuxhumana. Ukuthungwa kukuvumela ukuba uthengise kuziteshi eziningi zokuthengisa nokulawulwa kwempahla kusuka endaweni eyodwa Stitch Izici Amashaneli Wokuthengisa Amaningi - Lawula konke kusuka eku-odeni kuya ekukhokhweni kuthunyelwe kusistimu eyodwa. Ukuphathwa Kwezimpahla - ukugcina izinombolo ezinembile nokuqinisekisa ukuthi ama-oda acutshungulwa kahle. Ukulandelwa Kwe-oda - ukushintsha
NgoLwesine, Novemba 14, 2013 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi I-Visual Website Optimizer iyithuluzi lokuhlola i-A / B elivumela ochwepheshe bezentengiso ukuthi benze izinhlobo ezahlukene zamawebhusayithi abo namakhasi okufika besebenzisa isihleli sokukhomba bese uchofoza bese ubona ukuthi yiluphi uhlobo olukhiqiza isilinganiso sokuguqulwa esiphezulu noma ukuthengisa. I-Visual Website Optimizer futhi iyisoftware yokuhlola eguquguqukayo (indlela ephelele yokufundwa kwezinto) futhi inezinombolo zamathuluzi angeziwe njengokukhomba kokuziphatha, imephu yokushisa, ukuhlolwa kokusebenziseka, njll. Ukuhlolwa kwe-A / B - Dala ngokubonakalayo izinhlobo ezihlukile zewebhusayithi yakho
NgoMsombuluko, Novemba 4, 2013 NgoMsombuluko, Novemba 4, 2013 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Zimbalwa izinto ezingakhungathekisa njengokuhlela i-imeyili HTML template noma ukusebenza nomakhi wesifanekiso senkampani yangaphandle. Cabanga ukukwazi ukuhlela, ukuklama, ukuhlela kabusha, futhi wenze ngezifiso izifanekiso zakho ze-imeyili… ngaphandle kokubhala nge-HTML noma amakhono wokuklama wewebhu. Lokhu yikho kanye okwenziwe yi-dotMailer nge-EasyEditor yabo. Izici ze-EasyEditor ye-dotMailer: Ngenisa ngokushesha izithombe zakho bese udala umtapo wezincwadi - Hlala uhlelekile ngazo zonke izithombe zomkhankaso endaweni eyodwa. Umlayezo womkhankaso wokuhlola
ULwesithathu, May 22, 2013 Douglas Karr
Isikhathi sokufunda: <1 iminithi Ukukhetha ipulatifomu ye-ecommerce kuncike kokuguquguqukayo okuningi. Inani lemikhiqizo oyithengisayo, ukwenza ngokwezifiso leyo mikhiqizo etholakalayo, izidingo zokuhlanganiswa, nezinsizakusebenza zokwenza ngcono nokwenza ngcono ipulatifomu konke kudlala indima. IMagento iqhume njengepulatifomu yebhizinisi yokuzikhethela ngenxa yokuguquguquka kwayo ngokwezifiso kanye nezithameli eziningi zabasebenzisi ezakha izixazululo nokuyisekela. Sinozakwethu weMagento Platinum esisebenza naye
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Ama-My Mobile Fans anikela ngezinhlelo zokusebenza ezingabizi zeselula namawebhusayithi weselula endawo yomuntu ngamunye, engenzi nzuzo kanye nebhizinisi elincane ngomkhakha wabo ohola umkhakha wohlelo lokusebenza lwe-Do-It-Yourself (DIY). Ngezici ezicebile ezingaphezu kuka-40 zokusebenzisa imithombo yezindaba yeselula, indawo kanye nomphakathi, zingaba yinkundla yamapulatifomu engabizi kakhulu futhi enamandla kakhulu emakethe. Isicelo silula, sinikeza iwizard yesinyathelo ngesinyathelo ukukudonsa ngokusetha uhlelo lwakho lokusebenza lweselula. Isinyathelo 1: Khetha ifayela lakho le-
Okudlule 1 ... 5 6 7 8 Okulandelayo →
Ikhasinkomba 6 of 8